कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्नुपर्छ ? – Satabdi News
होमपेज / स्वास्थ्य / कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्नुपर्छ ?
कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्नुपर्छ ?
कलेजो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा ठूलो अंग हो। यो लगभग एक– साढे एक केजीको हुन्छ। कलेजोले हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने प्रोटिन र आल्मुनियम जस्ता थुप्रै तत्वहरु बनाउँछ। यसका काम अनेकौं हुन्छन् । यसमध्ये पनि मुख्य भनेको शरीरको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नु हो ।
हामीले खाएको खाना कलेजोमा जान्छ र सुगर तथा पोषिलो तत्व बढेको हुन्छ। नखाएका बेलाका लागि पनि यसले ‘व्यालेन्स’ गरिराखेर व्यवस्थापन गर्छ । केही हानिकारक कुरा खाइएमा त्यसलाई फाल्ने काम पनि कलेजोले गर्छ । हामीले खाएका औषधी कलेजोमा गएर मेटाबोलाइज हुन्छन् ।
कलेजो एउटा सिंगो अलग प्रकारको अंग हो । यसमा बिभिन्न समस्या आउन सक्छ, कुनै पनि कारणले बिग्रिन सक्छ । कुनै पनि कारणले बिग्रिएर सुन्निने समस्यालाई ‘हेपाटाइटिस’ भनिन्छ । यो अल्पकालिन र दीर्घकालिन दुवै हुन सक्छ । कुनै विशेष कारणवश् सात दिनदेखि दस दिनमा समस्या आएमा त्यो अल्पकालिन हुन्छ ।
हेपाटाइटिस ‘ए’ र ‘इ’ सरुवा हुन्छन् जसलाई जण्डीस पनि भनिन्छ । यो पानीबाट सर्छ जसले कलेजो संक्रमण गर्छ। एकदेखि तीन महिनासम्ममा आफै हराएर जाने पानीबाट सर्ने हेपाटाइटिस हो ।
कलेजो बिग्रेको कारण अनुसार यसको उपचार गर्नुपर्छ। रक्सी वा कुनै औषधिका कारण कलेजो खराब भएको भए पहिले ती कुरा खान बन्द गर्नुपर्छ। राम्रो खाना र आराम भयो भने बिस्तारै समस्या कम हुँदै जान्छ ।
दीर्घकालीन हेपाटाइटिसमा पनि कारण पत्ता लगाई उपचार गरिनुपर्छ। कारण रक्सी भए बन्द गरेर वा कलेजोमा बोसो जमेको भए तौल घटाएर उपचार गर्नुपर्छ। बोसो जमेको भए चिल्लो कम खाने, व्यायाम गर्ने र आवश्यक परेमा औषधि पनि खानुपर्छ ।
त्यसैले यहाँसम्म पुग्नुअगावै जाँच गराउनुपर्छ । समयमै कलेजोको समस्या पहिचान र उपचार गर्न सकियो भने यसलाई जोगाउन सकिन्छ ।
समान्यतया कलेजोमा समस्या आएको थाहा हुँदैन । कलेजो बिगार्ने कीटाणु बिस्तारै सक्रिय हुन्छन् । तर कलेजो खराब भइसकेपछि थकान हुने र खुट्टाको मासु सुन्निने जस्ता लक्षण भने देखिन्छन् ।
कलेजोको समस्या हुन नदिन अत्यधिक रक्सी खानु हुँदैन। कहिलेकाँही खाने गरेपनि लतका हिसाबमा दैनिक र धेरै भने खानु हुँदैन । बेलाबखत हेपाटाइटिस ‘बि’ जाँच्नुपर्छ । सामान्य मानिसमा पनि यो हुनसक्छ । यो सर्ने सम्भावना १५ वर्ष मुनिकालाई बढी हुन्छ भने गर्भवती वा दूध खुवाउने आमाबाट बच्चालाई पनि सर्छ ।
You have reacted on "कलेजो कसरी बिग्रिन्छ, जोगाउन के गर्नुपर्छ ?" A few seconds ago